IHE IME MA Ọ BỤRỤ NA AYTYUNS ADỊGHỊ AHỤ IPHONE - ITUNES - 2019
Mbụ, tụlee nkọwa: adreesị MAC bụ njirimara njirimara nke ngwaọrụ netwọk nke edepụtara na ngwaọrụ ahụ na nhazi imepụta. A na-eziga kọntaktị netwọk ọ bụla, onye na-ahụ maka router na ntanetị Wi-Fi otu adreesị MAC pụrụ iche, na-agụnyekarị 48 ibe n'ibe.
Anyị na-amụta adreesị MAC na Windows 7
Adreesị anụ ahụ dị mkpa maka ọrụ ziri ezi nke netwọk, maka onye ọrụ nkịtị ọ dị mkpa na nhazi nke router. Ọtụtụ mgbe, Onye na-ahụ maka Ịntanetị na-eji nkwekọ dabere na adreesị MAC nke ngwaọrụ ahụ.
Usoro 1: Iwu Iwu
Push nchikotaNweta + Rma tinye iwu ahụcmd.exe.
Tinye otuipconfig / niile, anyị pịa "Tinye".
Mgbe ị banyere iwu a, ị ga-ahụ ndepụta nke netwọk na PC gị (ngosipụta dị mma gosipụtara). Na subgroup "Adreesị Ahụhụ" adreesị MAC ga - egosipụta (maka otu akụrụngwa, adreesị ahụ dị iche, nke a pụtara na adreesị nke kaadị netwọk dị iche na adreesị nke router).
Usoro a kọwara n'elu bụ ihe kachasịkarị ma na-enye ya na Wikipedia. E nwere ihe ọzọ dị iche iche ederede iwu nke na-arụ ọrụ na Windows 7. Ntuziaka a na - egosiputa ozi gbasara adreesị anụ ahụ na nsụgharị dị mfe, ma dị ka nke a:
ndepụta ndaputa / v / fo
N'otu ụzọ ahụ, tinye ya n'ime akara iwu wee pịa "Tinye".
Usoro 2: Usoro Windows 7
Eleghị anya, maka ndị mbido, usoro a ga-eleba anya na adreesị MAC nke kaadi netwọk ma ọ bụ rawụta karịa akọwapụtara n'elu. Mee nzọụkwụ atọ dị mfe:
Push nchikotaNweta + Rtinye iwumsinfo32, anyị pịa "Tinye".
A ga-emepe windo "Ozi System" na ya anyị na-aga na otu "Network"na mgbe ahụ, anyị na-aga "Onye nkwụnye".
Akụkụ aka nri nke panel ahụ ga-egosipụta ozi nwere adreesị MAC nke ngwaọrụ netwọk gị niile.
Usoro 3: Ndepụta Njikọ
Push nchikotaNweta + Rtinye uruncpa.cplMgbe ahụ ndepụta nke njikọ PC ga-emeghe.
Anyị pịnye PKM na njikọ ahụ a na-eji ugbu a, gaa "Njirimara".
Enwere ngalaba n'elu ngosipụta windo Njikọ nke meghere "Njikọ site na", ọ na-akọwa aha nke netwọk akụrụngwa. Bugharịa cursor òké na mpaghara a ma jide ya maka sekọnd ole na ole, windo ga-apụta na ihe ọmụma gbasara adreesị MAC nke ngwaọrụ a ga-egosipụta.
Site n'enyemaka nke ụzọ ndị a dị mfe, ọ ga-ekwe omume ịchọta ngwa Mac nke kọmputa gị na Windows 7.